Ndịàmà Jehova Hà Nwere Baịbụl nke Ha? | Ajụjụ Ndị Mmadụ Na-ajụkarị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bosnian Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch English Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kabyle Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Low German Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mende Mixe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndonga Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Otetela Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Valencian Venda Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ndịàmà Jehova agụọla Baịbụl dị iche iche. Ma, Baịbụl nke ha kacha enwe mmasị ịgụ bụ Baịbụl Nsọ—Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ, ma ọ bụrụ na ọ dị n’asụsụ ha. Ihe kpatara ya bụ na e dere aha Chineke na ya n’ebe niile o kwesịrị ịdị, ihe e dere na ya bụkwa eziokwu ma doo anya.
Ide Aha Chineke. Ụfọdụ ndị sụgharịrị Baịbụl enyeghị onye e kwesịrị inye nsọpụrụ nsọpụrụ. Dị ka ihe atụ, ndị sụgharịrị otu Baịbụl dere aha mmadụ iri asaa só nye aka n’iwepụta Baịbụl ahụ. Ma, ha edeghị aha onye e dere okwu ya na Baịbụl ahụ, ya bụ, Jehova Chineke.
Ma, e meghị ụdị ihe a na Baịbụl Nsọ—Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ. E dere aha Chineke ọtụtụ puku ugboro na ya. E dere ya n’ebe niile ọ dị na Baịbụl mbụ e nwere. Ma, e deghị aha ndị sụgharịrị ya.
Ikwu Ihe Bụ́ Eziokwu. Ọ bụghị Baịbụl niile e nwere taa kwuru ihe niile otú e si kwuo ya na Baịbụl mbụ e nwere. Dị ka ihe atụ, lee otú otu Baịbụl si kwuo ihe dị na Matiu 7:13. Ọ sịrị: “Sinu n’ọnụ ụzọ ámá dị warara banye, n’ihi na ọnụ ụzọ ámá na-eduga na hel dị obosara, okporo ụzọ ya dịkwa mfe ọgịga.” Ma, ihe e dere na Baịbụl mbụ bụ “mbibi” ọ bụghị “hel.” O nwere ike ịbụ na ihe mere ndị sụgharịrị ya ji dee ya “hel” bụ maka na ha kweere na a ga-ata ndị mmehie ahụhụ n’ọkụ ala mmụọ. Ma, ihe a abụghị ihe Baịbụl na-akụzi. Ọ bụ ya mere Baịbụl Nsọ—Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ ji dee ya otú e kwesịrị isi dee ya. Ọ sịrị: “Sinụ n’ọnụ ụzọ ámá dị warara banye; n’ihi na okporo ụzọ nke na-eduba ná mbibi sara mbara ma dị obosara.”
Ikwu Ihe Doro Anya. Ọ bụghị naanị na Baịbụl a sụgharịrị nke ọma kwesịrị ịna-ekwu eziokwu, kama ihe ọ na-ekwu kwesịkwara ido anya, dịkwa mfe nghọta. Dị ka ihe atụ, o nwere ihe Pọl onyeozi kwuru ná Ndị Rom 12:11. A sụgharịa mkpụrụ okwu nke ọ bụla dị n’ihe ahụ o kwuru, ihe ọ pụtara bụ “nye mmụọ nke na-agbọ agbọ.” Ebe ọ bụ na ihe a enweghị ezigbo ihe ọ pụtara n’asụsụ Igbo, lee otú e si dee ya na Baịbụl Nsọ—Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ ka o nwee ike ido onye ọ bụla anya. Ọ sịrị: “Ka mmụọ Chineke mee ka unu na-anụ ọkụ n’obi.”
E wezụga itinye aha Chineke n’ebe niile o kwesịrị ịdị, ikwu eziokwu, na ikwu ihe doro anya, o nwekwara ihe ọzọ mere Baịbụl Nsọ—Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ ji pụọ iche. Ihe ahụ bụ na a na-enye ya ndị mmadụ n’efu. O meela ka ọtụtụ nde mmadụ, ma ndị nke na-agaghị azụtali Baịbụl, nwee ike inweta Baịbụl ma gụọ ya n’asụsụ ha.